Home Wararka Askari katirsan Ciidamada Dowlada Oo isku Dilay Magaalada Muqdisho
Askari katirsan Ciidamada Dowlada Oo isku Dilay Magaalada Muqdisho
Askarigaan ayaa xalay waxa uu isku-dilay xaafad ka tirsan degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir,waxana la sheegay in uu xabad isku-dhuftay.
Ehelada Askariga ayaa sheegay in Askariga uu Bustoolad uu ku ciyaariyey ay ku fakatay,isla markaana Madaxa ay ka fariisatay xabadii.
Intaasi ka dib dhaawaca askariga ayaa waxaa loo qaaday Isbitaalka Madiina ee M/Muqdisho si loogu daweeyo,waxana xilligaasi ay Dhaqaatiirtu sheegeen in wax qaliin ah aan la sameyn Karin.
Ehelada qaarkood ayaa inoo sheegay in Dhaqaatiirta Isbitaalka ay ka diideen in ay Wiilkooda la baxaan xilligaas si goobo kale oo Caafimaad u geeyaan taas oo keentay in uu isla xalay ku geeriyoodo Gudaha Isbitaalka Madiina.
Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in Maanta uu taagan yahay muran u dhaxeeya Ehelada Askariga Xabada isku-dhuftay iyo Maamulka Isbitaalka.
Billihii u dambeeyey ayaa waxaa dalka ku soo batay dadka is- dilaya waxaana dhawaan Muqdisho ka dhacay dhowr qof oo iyaga Gacantooda isku-dilay.
Previous articleKooxo Hubeysan ayaa Suuqa Bakaaraha Ku dilay Masuul katirsan Degmada Howlwadaag
Next articleDFS Oo Lagu Eedeyay inay Musuq-Maasuqdo deeqaaha ay Beesha Caalamka ugu deyqaan
Shirka Dhamestirka Wadahadalada Galmudug iyo Ahlu Suna oo Baaqday
Gudoomiye Yuusuf Daba-geed oo sheegay in uusan Aqbali doonin Fara-gelin lagu...